Mmemme Mmetụta na Ịkpa Ọkụ na -emechi ememme ndị njem nke afọ a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Mmemme Mmetụta na Ịkpa Ọkụ na -emechi ememme ndị njem nke afọ a
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Ịrụ ọrụ • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Imechi mmemme njem nlegharị anya nke Seychelles
Imechi mmemme maka njem nlegharị anya n'afọ a, ụmụaka ndị ọrụ sitere na ngalaba nlegharị anya nke Seychelles sonyeere ndị ọrụ ngo Ecosystem Based Adaptation (EBA) maka ọrụ ịkụ osisi na Satọde a, Ọktoba 2, 2021, na "Dan Sours" na Val Den. N'ezie, Baie Lazare.
Ụmụ akwụkwọ gosipụtara ịnụ ọkụ n'obi na obi ike ha, ebe ha ji obi ike na -eche oke mmiri ozuzo, ha nyeere ndị otu abụọ aka ịkụ ihe dị ka ụdị ala 200.
Ngalaba ahụ kpebiri itinye ndị na -eto eto nke obodo ka ha bụrụ akụkụ nke ọrụ mmetụta.
Ọrụ a na -egosipụta ntinye aka nke ngalaba ahụ ime ihe iji wezuga ikuku anwụrụ ọkụ nke ihe omume ndị njem kpatara.
N'ịkwado nkwenye nke ebe a na -alụ ọgụ megide mgbanwe ihu igwe, ụmụ akwụkwọ gosipụtara ịnụ ọkụ n'obi na obi ike ha, dịka, na -atụ egwu oke mmiri ozuzo, ha nyeere ndị otu abụọ aka ịkụ ihe dị ka ụdị ala 200 gụnyere "lantannyen fey," "lantannyen milpat," "lantannyen lat," “Akpụkpọ ụkwụ,” “vakwa,” na “lafous” na saịtị EBA.
Ọ bụ ndị ndú ha na -edu ha Seychelles Onye minista na -ahụ maka ihe ndị si mba ọzọ na njem nlegharị anya, Sylvestre Radegonde, onye odeakwụkwọ ukwu maka njem nlegharị anya, oriakụ Sherin Francis, onye isi ụlọ ọrụ maka ịre ahịa akara aka, Oriakụ Bernadette Willemin, na onye isi ụlọ ọrụ na -ahụ maka nchịkwa na ọrụ mmadụ, nwada Jenifer Sinon.
N'oge mmemme ahụ, Minista na -ahụ maka njem nlegharị anya kwuru na n'ikwekọ na isiokwu afọ a maka ememme a, ngalaba ahụ kpebiri itinye ndị na -eto eto nke obodo ka ha bụrụ akụkụ nke ọrụ mmetụta.
“Childrenmụaka bụ ọdịnihu ụlọ ọrụ na obodo anyị. Ọ dị mkpa ka anyị tinye ha na mmemme dị iche iche nke ememme ahụ. Enwere m obi anụrị ịhụ ịhụ ịnụ ọkụ n'obi ha na -enyere anyị aka igwu ala na ịkụ ihe. Ọ bụ nnukwu ihe mmụta na isi iyi nke mkpali nye anyị niile nọ na 'Dan Sours,' ”ka o kwuru.
Mgbe ọ na -ekwu okwu na redio mpaghara "Radyo Sesel," Oriakụ Francis kwuru na ọrụ ahụ na -egosi ntinye nke ngalaba ahụ ime ihe iji wezuga ikuku carbon sitere na ihe omume njem.
“Gburugburu ebe obibi anyị bụ otu n'ime ihe kacha mkpa ebe anyị na -aga. Ịma mma nke agwaetiti anyị dabere na omume anyị iji lekọta ya. Ọ bụ ya mere anyị ji etinye ọrụ nhicha mgbe niile n'oge ememme ndị njem anyị. Dị ka ọgbakọ anyị kpebisiri ike ịga n'okwu ahụ, n'afọ a anyị gbakwunyere ọrụ ịkụ osisi ka anyị wee kwadoo mkpebi anyị maka mbibi nke ikuku carbon na ichekwa ihe ndị dị n'ime gburugburu ebe obibi anyị, "ka Oriakụ Francis kwuru.
Ọrụ ịkụ osisi mechiri ememme njem nlegharị anya nke 2021 nke a na -eme n'isiokwu bụ 'ịkpụzi ọdịnihu.'